ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတော့မယ် — မြန်မာဌာန
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးရာမှာ အနုပညာမြောက်ပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမီတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကား ဖြစ်ဖို့ လိုလားတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆွေးနွေးပွဲ စတင်ချိန်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျမတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းကို သရုပ်ဖော်တဲ့ ရုပ်ရှင်တခု ဖြစ်စေချင်တယ်။ ကျမတို့နိုင်ငံအတွက် သမိုင်းမှာ တကယ့်ကို အနုပညာအရရော သမိုင်းအရရော မှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့၊ အနုပညာမြောက်တဲ့ အလုပ်တခု ဖြစ်စေချင်တယ်။ တခါမှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလောက်အထိ မြောက်တဲ့ဟာ မဖြစ်ဖူးသလို၊ နောက်ဆုံးမဟုတ်ဘူး ပထမဦးဆုံး၊ နောက်လည်း အများကြီးလာမယ်။ တခါမှ ဒီလောက်တောင် သမိုင်းကို တိတိကျကျ အခြေခံတဲ့ ဟာမျိုး မရှိသေးဘူးဆိုတာ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဆိုတော့ အဲဒါကို အားလုံးဝိုင်း ကူညီမှဖြစ်မယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီလို ရုပ်ရှင်အတွက် သုံးနှစ်ဆိုတာ အင်မတန်နည်းတယ်ဆိုတာ ကျမ သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်တော့ ၂ဝ၁၅ ကလည်း ဖေဖေ့ရဲ့ နှစ်တရာ ပြည့်နှစ်ဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ထုတ်နိုင်ချင်တယ်”
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ သုတေသန ကော်မီတီတရပ်ကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နာယကအဖြစ် ဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဝါရင့် ဒါရိုက်တာကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မောင်မိုးသူ၊ စံရွှေမောင် (ခေါ်) ဦးအောင်လွင်နဲ့ ကိုဇာဂနာ၊ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)၊ ဦးဇင်ဝိုင်း စသူတွေ ပါဝင်ပြီး လိုအပ်မယ့် ကုန်ကျငွေအတွက် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေက ဝိုင်းဝန်း ရှာဖွေပေးမယ်လို့ ကတိပေးကြကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို လာမယ့် ၃ နှစ်အတွင်း အပြီး ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အနှစ် ၁ ရာပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသနိုင်အောင် စီစဉ်ကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ စုစုပေါင်း လူ ၁ ရာကျော် တက်ရောက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) ကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထား ပါတယ်။
I always dream about this too, hope my dream come true.
It need be real history of Burma, not only good things but also bad things should included.
အလွူေငြလုိအပ္မွာပါ ဒီဖေအ ဒီိသမီး တုိင္းျပည္အတြက္ပဲလုပ္ေနတာ မည္သူလက္ခံလုိ႕ ဘယ္လုိဆက္သြယ္ရမယ္ဆုိတာ သိပါရေစ။